रेजिना पाण्डे - Rejina Pandey | Nagarik News - Nepal Republic Media
रेजिना पाण्डेका लेखहरु :
अर्थात जहाँ नारीको पूजा र सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवताको पनि बास हुन्छ। के यो भनाइअनुसार साँच्चै ने नारीको सम्मान र कदर भएको छ त हाम्रो समाजमा ? धार्मिककालदेखि नै महिलालाई महादेवी, महालक्ष्मी, महासरस्वतीको दर्जा दिएको छ। महिलालाई जननी पनि मानिँदै आएको छ। तर आज जताततै महिलामाथि हिंसा, बलात्कार र तिरस्कारका बाढी नै आएका छन्।
रेजिना पाण्डे २५ आश्विन २०७७ आइतबार ४ मिनेट पाठ
ढाल लगाउन कन्जुस्याइँ किन ?
दुई छोरीकी आमा। श्रीमान्–श्रीमती दुवैलाई थप सन्तानको चाहना छैन। त्यसैले उनी श्रीमानलाई यौन सम्पर्क गर्दा परिवार नियोजनको अस्थायी साधन प्रयोग गर्न आग्रह गर्छिन्। तर उनका श्रीमान् मान्दैनन्।
रेजिना पाण्डे २४ भाद्र २०७७ बुधबार ४ मिनेट पाठ
पृथक शैलीको तिज
महिलाको महान् पर्व हरितालिका तिज आँगनमै आइसकेको छ । त्यसैले यतिबेला महिला पोते, चुरा र नयाँ कपडा आदि किन्न व्यस्त देखिन्छन् । लामो समयदेखि कोरोनाको डरका कारण घरभित्रै पिल्सिएका महिलामा कोरोनाको त्रास कायमै भए पनि केही उत्साह भने देखिएको छ ।
रेजिना पाण्डे ४ भाद्र २०७७ बिहीबार ३ मिनेट पाठ
संसार जितेको महसुस
महिला हिंसा दिनहुँ बढिरहेको छ । अझ त्यसमा पनिघरभित्रै हुने हिंसा घट्ने कुनै गुञ्जायस नै छैन । यस्ता घटनाले हाम्रो समाजलाई नै दूषित तुल्याएको छ । आफ्नै भनिएका श्रीमान्, सासू/ससुरा, नन्द/आमाजु, देवर/जेठाजु आदिबाट क्रमशः महिला मारिइरहेका छन् ।
रेजिना पाण्डे १६ श्रावण २०७७ शुक्रबार ४ मिनेट पाठ
मेरो भगवान हराएको छ
हरेकका मनबाट त्रासदीपूर्ण तस्बिर अझै हट्न सकेका छैनन्। हटोस् पनि कसरी ? महामारीकोयो रोग आएको पनि झण्डै चार महिना भइसकेको छ। ठाउँठाउँ होहल्ला मच्चिएको नै छ। त्यसो त धेरैका इहलीला मात्र होइन, पटक पटक अलग अलगरूपमा प्रकृतिले हामीलाई दौडाएको छ।
रेजिना पाण्डे १० असार २०७७ बुधबार ६ मिनेट पाठ
भोको मर्न र चुल्लो निभ्न नदिने अभियान
चीनको वुहानबाट देखिएको कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड–१९ ले अहिले विश्वभरि नै आतंक मच्चाइरहेको छ यतिखेर यो महामारीले कसैलाई पनि अछूतो राख्न सकेन । धैरेले आफ्नो ज्यान गुुमाइसकेका छन् ।
रेजिना पाण्डे २९ जेष्ठ २०७७ बिहीबार ५ मिनेट पाठ
रेजिना पाण्डेका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्